Usoro iheomume Bosphorus Express na Ahịa tiketi | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraUsoro iheomume Bosphorus Express na Ahịa tiketi
09 / 12 / 2019 06 Ankara, 34 Istanbul, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Map nke Bogazici Express
Usoro Mbido Bosphorus Express na Ahịa tiketi; N'agbata Ankara na Sakarya, Bosphorus Express amalitela ụgbọ elu iji gboo mkpa ụgbọ njem n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe ndị na-ebugharị ụgbọ na-agaghị akwụsị. Nwere ike ịchọta ozi gbasara nhazi oge Bosphorus Express, nhazi oge na oge njem ụgbọ.
Ejiri Bosphorus Express mee ihe iji mezuo ihe ọha mmadụ chọrọ maka nkasi obi na njem, bụ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè nke TCDD na-arụ n'etiti Istanbul na Ankara. 2012-2014 nọ na-arụ ọrụ n'etiti Arifiye na Eskişehir. A kwụsịrị ụgbọ okporo ígwè 24 na July 2014 ma jiri ụgbọ mmiri YHT dochie ya.
Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa nke Turkey, ekwuputala na ha ejiri nlezianya nyochaa ụdị njem nke ụmụ amaala na ha amalitela ọrụ ọhụrụ ọ bụghị naanị na YHTs kamakwa n'ahịrị ndị nwere ụgbọ oloko ọhụrụ na ịmaliteghachi Bosphorus Express.
Oge Njem Bosphorus Express
Boğaz Na Bosphorus Express ga-arụ ọrụ n'ehihie, oge njem ga-abụ ihe dịka 6 awa. Traingbọ ahụ ga-apụ na Ankara na 08.15 ma rute Arifiye na 14.27. Traingbọ oloko, nke ga-apụ na Arifiye na 15.30, ga-erute Ankara na 21.34. Bosphorus Express nwere ikike njem ndị njem nke 240 ga-enwe ụgbọ agha nchịkwa 4. Xlọ ọrụ 16, nke ukwu na nke pere mpe, ebe ihe ndị YHT na-akwụsịghị, ga-ebugo ya na ibubata ya site na ndị njem na ọdụ a ga-abawanye ma ọ bụrụ na ihe a choro dị elu ”.
Boğaziçi Express ga-abanye ndị njem n'ọdụ ụgbọ oloko a. Esenkent (nwere ọnọdụ nkwụsị) Temelli, Polatli, Beylikkopru, Bicer, Sazak, Yunusemre, Beylikova, Alpu, Eskisehir, Bozuyuk, Karakoy, Bilecik, Vezirhan, Osmaneli, Alifuatpasa, Dogancay'da ga-akwụsị.
Ankara Rail Station
Usoro iheomume Bosphorus Express
Onwere otu njem n’etiti Ankara Arifiye na oge ndị a:
Ankara Arifiye 08: Oge ihe nkiri 15
Ankara Rail Station 08: 15
dabeere 08: 57 08: 58
Arifiye Ankara 15: Usoro iheomume 30
dabeere 20: 41 20: 44
Ankara Rail Station 21: 34
Map nke Bosphorus Express
Ọnụahịa Tikselụ Bosphorus Express
Ogologo njem ogologo nke Bosphorus Express (2 + 1 Pulman) £ 55 .
Akụkọ banyere Bosphorus Express
Bosphorus Express bụ okporo ụzọ okporo ụzọ nke TCDD na-arụ n'etiti Istanbul na Ankara. 2012-2014 nọ na-arụ ọrụ n'etiti Arifiye na Eskişehir. A kwụsịrị 24 na July 2014 ma jiri ụgbọ oloko YHT dochie ya. O jiri ụgbọ ala ohuru nke CIWL, otu n'ime ụgbọ oloko na-eduga TCDD, bidoro njem ya, n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè Ankara na Ankara. Ọnụ ego otu tiketi bụ 1 lira na tiketi njem gburugburu bụ 1968 lira. A na-edobe okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ahụ mmanụ ụgbọ oloko na 32 km site na Istanbul ruo Arifiye na 56. 1977 Na Jenụwarị 131, ụgbọ oloko nke Ekspres nwere ụgbọ oloko nke Anatolian Express na nso Esenkent.
Usoro nhazi oge Transacia Express Ankara Tehran na ụgwọ tiketi
Bosphorus Express ụgbọ elu
Channel Channel iji chekwaa Bosphorus site na ihe ọghọm